Otu nwoke aha ya bụ Lionel kwuru, sị: “Echere m na ebe atọ mmadụ nwere ike ịga ma ọ nwụọ bụ eluigwe, ọkụ mmụọ na pọgatrị. Ama m na erughị m eru ịga eluigwe nakwa na ajọ omume m erughị nke ịga ọkụ mmụọ. Ma, aghọtachaghị m ihe a na-akọ gbasara pọgatrị. Ndị mmadụ na-ekwu na ndị nwụrụ anwụ na-aga n’ebe atọ ndị a. Agụtatụbeghị m ụdị ihe ahụ na Baịbụl.”
Otu nwoke aha ya bụ Fernando kwuru, sị: “A kụziiri m na mmadụ nwụọ, ya agaa eluigwe, ma ekwetaghị m. Echere m na onye nwụọ nke ya agaala, onye ahụ emekataghị dịrị ndụ ọzọ.”
È nwetụla mgbe ị jụrụ onwe gị, sị: ‘Gịnị na-eme mmadụ ma ọ nwụọ? È nwere ebe ndị anyị hụrụ n’anya nwụrụ anwụ nọ na-ata ahụhụ? Ànyị ga-ahụ ha ọzọ? Olee otú anyị ga-esi amata nke bụ́ eziokwu?’ Ka anyị legodị ihe Baịbụl kwuru. Anyị ga-ebu ụzọ leba anya n’ihe o kwuru na-eme mmadụ ma ọ nwụọ. E mechaa, anyị eleba anya n’ihe o kwuru gbasara ndị nwụrụ anwụ ịdị ndụ ọzọ.
IHE BAỊBỤL ZARA: “Ndị dị ndụ maara na ha ga-anwụ; ma ndị nwụrụ anwụ amaghị ihe ọ bụla ma ọlị, ọ dịghịkwa ụgwọ ọrụ ha nwere ọzọ, n’ihi na e chefuwo ihe niile a pụrụ icheta banyere ha. Ihe niile ruru gị aka ime, jiri ike gị dum mee ha, n’ihi na ọrụ ma ọ bụ ichepụta ihe ma ọ bụ ihe ọmụma ma ọ bụ amamihe adịghị na Shiol, ebe ị na-aga.” *—Ekliziastis 9:5, 10.
Shiol bụ ebe onye ọ bụla nwụrụnụ na-aga. Ndị niile nọ na ya amaghị ihe ọ bụla, o nweghịkwa ihe ha ga-emeli. Olee ihe Job bụ́ onye ezi omume chere gbasara Shiol? N’otu ụbọchị, ụmụ Job na ihe niile o nwere lara n’iyi. Ka obere oge gachara, etuto ọjọọ etoo ya n’ahụ́ niile. Job rịọrọ Chineke sị: “A sị nnọọ na ị ga-ezobe m na Shiol, [“n’ime ala mmụọ,” Baịbụl Nsọ: Nhazi Katọlik] na ị ga-ezobe m.” (Job 1:13-19; 2:7; 14:13) O doro anya na Job ewereghị Shiol ka ọkụ ala mmụọ, ebe ọ ga-aga takwuo ahụhụ. Kama, o weere ya ka ebe ọ ga-anọ zuru ike.
Ihe ọzọ ga-enyere anyị aka ịghọta ihe na-eme mmadụ ma ọ nwụọ bụ ịgụ ihe e dere na Baịbụl gbasara mmadụ asatọ si n’ọnwụ bilie.—Gụọ ihe e dere n’igbe isiokwu ya bụ, “ Mmadụ Asatọ Baịbụl Kwuru na A Kpọlitere n’Ọnwụ.”
O nweghị onye n’ime ha kwuru na ya gara n’ebe ọ nọ na-enwe obi ụtọ ma ọ bụ na-ata ahụhụ. Ọ bụrụ na ha gara ụdị ebe ndị ahụ mgbe ha nwụrụ, ọ̀ bụ na ha agaraghị akọrọ ya ndị mmadụ? A gaara edekwa ya na Baịbụl ka onye ọ bụla nwee ike ịgụ ya. Ma, e deghị ụdị ihe ahụ na Baịbụl. O doro anya na mmadụ asatọ ahụ sí n’ọnwụ bilie enweghị ihe ha ga-ekwuli mere mgbe ha nwụrụ, n’ihi na ha dị ka ndị nọ́ n’oké ụra, ha amaghịkwa ihe ọ bụla. E nwedịrị ebe ụfọdụ Baịbụl kwuru na onye nwụrụ anwụ nọ n’ụra. Dị ka ihe atụ, Baịbụl kwuru na Devid na Stivin, bụ́cha ndị ezi omume, “dara n’ụra ọnwụ.”—Ọrụ Ndịozi 7:60; 13:36.
Ajụjụ bụzi: Ndị nwụrụ anwụ hà ga-adị ndụ ọzọ? Hà ga-emecha sí n’ụra ọnwụ bilie?
^ para. 7 Okwu Hibru bụ́ “Shiol” na okwu Grik bụ́ “Hedis” pụtachara “ili.” Otú e si sụgharịa ya n’ụfọdụ Baịbụl bụ “ala mmụọ,” ma Baịbụl ekwughị na e nwere ọkụ ala mmụọ a na-ata ndị mere ihe ọjọọ ahụhụ ma ha nwụọ.
MMADỤ ASATỌ BAỊBỤL KWURU NA A KPỌLITERE N’ỌNWỤ *
Nwa nwoke nwaanyị di ya nwụrụ Ịlaịja onye amụma kpọlitere nwa nwoke nke otu nwaanyị di ya nwụrụ. Ha bi na Zarefat nke dị n’ebe ugwu Izrel.—1 Ndị Eze 17:17-24.
Nwa okoro onye Shunem Ịlaịsha, bụ́ onye nọchiri anya Ịlaịja, kpọlitere otu nwa okoro ya na ndị mụrụ ya bi n’obodo Shunem ma kpọnye ya ndị mụrụ ya.—2 Ndị Eze 4:32-37.
Otu nwoke a tụbara n’ebe e liri mmadụ Ndị gara ili ozu otu nwoke ji ụjọ tụba ya n’ebe e liri Ịlaịsha ma gbalaga. Mgbe ozu nwoke ahụ metụrụ ọkpụkpụ Ịlaịsha, nwoke ahụ si n’ọnwụ bilie.—2 Ndị Eze 13:20, 21.
Nwa nwoke nke nwaanyị Nen di ya nwụrụ Jizọs kwụsịrị ndị sí n’obodo Nen buru ozu otu nwata nwoke na-apụ ịga lie ya. Ọ kpọlitere nwata nwoke ahụ ma kpọnye ya nne ya.—Luk 7:11-15.
Nwa nwaanyị Jeirọs Otu nwoke aha ya bụ Jeirọs, bụ́ onyeisi oche nke ụlọ nzukọ, bịakwutere Jizọs ma rịọsie ya ike ka ọ bịa gwọọ nwa ya nwaanyị ahụ́ na-adịghị. Nwata nwaanyị ahụ nwụrụ tupu Jizọs abịaruo. Ma, Jizọs kpọlitere ya.—Luk 8:41, 42, 49-56.
Ezigbo enyi Jizọs bụ́ Lazarọs Lazarọs nwụrụ, ụbọchị anọ agaakwa, tupu Jizọs abịa kpọlite ya. Ọtụtụ ndị hụkwara mgbe ọ kpọlitere ya.—Jọn 11:38-44.
Otu nwaanyị aha ya bụ Dọkas E ji imere ndị mmadụ ihe ọma mara nwaanyị a. Mgbe ọ nwụrụ, Pita onyeozi kpọlitere ya.—Ọrụ Ndịozi 9:36-42.
Yutikọs Otu nwa okorobịa aha ya bụ Yutikọs si na windo dị n’okpukpu ụlọ nke atọ daa ma nwụọ, Pọl onyeozi akpọlite ya n’ọnwụ.—Ọrụ Ndịozi 20:7-12.
^ para. 15 Mbilite n’ọnwụ kacha mkpa e dere na Baịbụl bụ nke Jizọs Kraịst. Isiokwu na-eso nke a ga-agwa anyị ihe mere o ji pụọ iche.
Olee ihe mkpọlite Jizọs kpọlitere ndị mmadụ n’ọnwụ na-akụziri anyị banyere ihe ndị Baịbụl gwara anyị ga-eme n’ọdịnihu?